India: Bhaderwah kuurayiwa: mapurisa anoramba kubatanidzwa kwekuteerera kwemitemo activist India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Kuurayiwa kweBhaderwah: Mapurisa anoramba kubatanidzwa kwekuteerera mutemo activist India News
India: Kuurayiwa kweBhaderwah: Mapurisa anoramba kubatanidzwa kwekuteerera mutemo activist India News
JAMMU: Mapurisa akaramba Ichishanu kubatanidzwa varindi vemhou mukuponda kwemurume wemakore 50, vakapfura vakafa musi weChishanu muguta reBhaderwah, mudunhu reDoda, muguta reBhaderwah. Kusvika parizvino, kunyange vatadzi havana kuonekwa kana chinangwa chekuuraya kwakagadzwa.
Munguva iyi, nguva yekuvhara nguva yakaramba ichishanda kwezuva rechipiri rinopfurikidza muguta rakakanganiswa nechisimba. Musi weChina, mapurisa akabata vamwe vanhu vaviri kuti vabvunze mibvunzo, vachiunza nhamba yevasungwa kusvika kune vasere.
J & K mapurisa akataurirana achiti: "Mimwe mitambo yemavhidhiyo inotaura zvisina kunaka kuurayiwa kwevanhu muBudderwah semhosva yekuponda kuuraya mhou dzenzombe. Aya mashoko asingakanganisi anonyatsoratidzwa. hapana ruzivo rwakadaro rwakasimbiswa munguva yekuongorora kusvika ikozvino. "
"Kusvikira ikozvino, uyo anopomerwa haazivi uye chirevo chekuurayiwa hachizivikanwi. Mishumo ine zvinoreva mutemo uye kurongeka inopeswa, "akadaro imwe tweet.
Mutungamiriri Satya Pal Malik Inodana vagari kuti vagare vakagadzikana uye varambe vane rugare. Akavakumbira kuti vabate pamwe nemapurisa. "Akakurudzirawo vatungamiri vatungamiri munharaunda kuti vabatsire mapurisa uye hurumende kutarisira mamiriro acho ezvinhu," akadaro mutauriri wehurumende. Mumwe mukuru mukuru wehutungamiri wehupfumi akati zvibvumirano zvainge zvakatemerwa senzira yekuchengetedza uye kuti mamiriro ezvinhu ega muguta racho akanga ava nerunyararo.
Musi weChina nepamusoro pe2 mangwanani, Nayeem, aigara muKilla Mohallah munzvimbo yeBhaderwah, akafurirwa akafa muNalthi, asi shamwari yake Azhar Ahmed yakakuvadzwa. Vagari vatsamwirwa vakatora kumigwagwa uye vakashandura mabweji uye mahombekombe mushure mekuponda, zvichiita kuti hurumende inotarisirwa kuisa nguva yekuvhara. Kuwedzerwa simba kubva kuJammu uye kumativi akavakidzana kunofanirwa kumhanyirira kudzora mamiriro acho ezvinhu.
Ita pfungwa dzechisarudzo ku Lok Sabha mu 2019 uye migumisiro ye23 May naIYO. Titevere isu kuti titevere nhau dzekupedzisira, mararamiro ehupenyu, nhepfenyuro yekuongorora uye yakadzama data analysis. Tevera mararamiro zvikwata zvechisarudzo maitiro makuru uye kushandiswa kunonoka kwezuva rekuverenga nehukuru hwese ruzivo rwekuIndia.
Switzerland: Switzerland: nzvimbo itsva yemimhanzi, nguva yakasunungurwa
US inobvumirana kusimudza mitero yesimbi uye aluminium neCanada neMexico
Kurasikirwa uremu: hezvino chiratidzo chinozivikanwa nekaoma zvakaoma mazai kuti urege kurasikirwa ne5 Kg muvhiki - SANTE PLUS MAG
Mheto OL - OL: Ferland Mendy pa Real, Zidane haati kwete - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Mumwe munhu angave achangobva kubudisa zvirongwa zvose zveMicrosoft for E3 2019 - BGR
Alain Delon anoratidza kuti nguva dzose "anotambudzwa" nevakadzi
India: Aimbova mapurisa eKolkata anotsvaga kudzivirirwa kweCS kusungwa kwe CBI | India News
VANHU & VANHU3,572
TECH & TELECOM1,992